တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် …
Posted by မေဓာဝီ at 3:54 PM
I am not sure my mm font would appear in the comment box. So, I tried to write it in English too.
I agree with you, Ma May. Currently, I heard many times that most of our ppl havealot of troubles in their daily life. Some could not find enough earning for their daily meals. Some have to drink rice liquid (instead of rice) for their meals. Our country is not supposed to be like this situation. I feel so sad for that from the bottom of my heart. Why could those so-called patriotic soldiers not know/see all these matters? It is clear that they do not have heart to hear about our ppl crying. They themselves are lacking integrity, nobody else.
Ya.. what is the meaning of Patriotic.
And how will you measure it. I guess every one loves his own country.
We wanna see our fertile land full of resources to world class country . We wanna see our people rich and educated. If I am not mistaken, that is people's desire.
Regardless of the who rule it.
Obviously, soldier is for defense, it is his job, the doctor should be in hospital, the student should be at school, the journalist should write articles, the reporter reports true and accurate news, ...more ...etc...... in the same way every one should do the right things.
As long as every one fully understand what he/she should do for the country.
he/she fulfill the country needs...... That's is called Patriotic.
Other wise...... all are in disorder...
I agree with you Ma May , we don't have to judge ourselves how much we love our country.....
Let the other see it and we proved it...
Thanks for sharing your thought.....
စစ်သားများ တိုင်းပြည်ကို ချစ်သည်ဆိုလျှင် ပြည်သူနှင့် ပူးပေါင်းပါ။ ကျနော် ဒါပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
အင်းခက်ပဲခက်ရချည့် ဘယ့်နှယ့် ဘယ့်နှယ့် ပြောရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။ ပြည်ချစ်စစ်သားရယ်။ မပြောတတ်တော့ဘူး။ အော် ဒါမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်တာကိုး။ လောကပါလနတ်မင်းများ ဘယ်မှာ အိပ်ပျော်နေပါသလဲ။
12/18/2006 1:23 AM
အဲဒီလိုရေးတဲ့လူ နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ တမျိုးက ဦးဏှောက်အဆေးခံလိုက်ရလို့ နိုင်ငံကိုချစ်ရင် လူကြီးတွေပြောသမျှခေါင်းညိတ်ပါ ဆိုတဲ့လူမျိုး၊ နောက်တမျိုးက နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ မကောင်းကြောင်း သိပေမယ့် ကိုယ်ကောင်းစားနေတဲ့အတွက် မသိနားမလည်သူတွေကို ဝင်ပြီး ဦးဏှောက်ဆေးချင်တဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ရေတိုပဲကြည့်တဲ့ အတ္တဘောတွေ။ ပထမလူမျိုးကိုတော့ သနားတယ်၊ ဒုတိယ လူမျိုးကို ရွံတယ်။
12/18/2006 3:54 AM
သိပ်ကောင်းတာဘဲ အစ်မ။ ကျွန်တော်လည်း ထောက်ခံပါတယ်။
ပြီးတော့ အောက်မှာကောမတ်ရေးသွားတာတွေကိုလည်း အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။
12/18/2006 4:35 AM
အမပြောမှပဲ သူတို့တွေ ဗမာပြည်ကြီးကို တကယ်ချစ်မှန်း ယုံတော့တယ်။ ခုတော့ သဘောပေါက်ပြီ၊ တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို…
12/18/2006 4:36 AM
မမေရေ …ကွန့်မင့်လေးရေးဖို့ ကွန်နက်ရှင်းမကောင်းလို့ တော်တော်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်၊၊ မမေနည်းတူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်၊၊ ဒီလိုရေးဖို့ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနှင့်ရေးတယ်ဆိုတာ အဲဒီ “ပြည်ချစ်သား”ဆိုတဲ့ လူကိုနားလည်ပေးလို့ မရပါဖူး၊၊ကိုယ့်ဝမ်းနာ၊ ကိုယ်သာသိတယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုး မကြားဖူးလို့နေမှာပါ၊၊ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဒုက်ခရောက် နေတယ် ဆိုတာ မသိဖူးနဲ့တူတယ်၊၊မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲလေနော်၊၊ သူတို့ လူစုက အဆင်ပြေနေကြတာကိုး၊၊
ကျမနဲ့ထပ်တူခံစားပြီး ကွန်မန့်ရေးပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
I agree with U, May dar wii...
Butalot of ppl are related with army... We love but how can we let " Than Shwe " to go jail like " Khin Nyunt"???
12/18/2006 2:41 PM
ကျနော်က တခုခု တုံ့ပြန်ရေးမလို့ ကြံစည် စောင့်ကြည့်တုန်းပဲ ရှိသေးတယ်.. အမက လက်ဦးသွားတာကိုး.. လွှတ်ထားလိုက်ပါ အမရာ.. ဒေါသသံတွေ ပါနေတယ်.. ဘယ်သူ ဘာဆိုတာ အားလုံးက သိနေကြပါတယ်.. သူတို့ချစ်တဲ့ အချစ်နဲ့ ကျနော်တို့က တိုင်းပြည်ပေါ် ချစ်တဲ့ အချစ် ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲ... တူစရာ အကြောင်းလဲ မရှိပါဘူး.. ဒီလိုပဲ ခံယူလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်.. ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်လျှောက်ကြတာပေါ့ဗျာ.. ဟုတ်ဘူးလား..
12/19/2006 2:28 AM
Since I happened to read such comment in ur blog, I have been feeling undigested in my mind. Yes, u all r right. We all love our country in different ways. If someone loves his country and its people, he need to show it in practical way. And it is also important to see things as they are. (I cannot make comment in Myanmar. Pls tell me how to if you know. I also install Zawgyi MyR Keyboard in my computer.)
12/20/2006 11:18 AM
twe le twe ye par pay dal, yay le yay ye par pay dal, hman le hman par pay dal, lo pe, hmat chat cha par ya say.. ma yay tat pay me, ma may ne , ta tha baw thar the shi nay de, kya naw
12/21/2006 7:00 AM
တောက်ညင်ကပ်လို့ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်...